ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရက ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်နိုင်ငံသားများအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၈၈ သန်းသုံးစွဲကာ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်မည် - Property News in Myanmar ::: iMyanmarHouse.com
ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရက ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်နိုင်ငံသားများအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၈၈ သန်းသုံးစွဲကာ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်မည်
ပြည်ပ အိမ်ခြံမြေ သတင်း | 21 Mar 2017 11:12 am | 362 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရ မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေး၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (MLMUPC) သည် ဝင်ငွေနည်းပါးသူများနှင့် လူလတ်တန်းစားများအတွက် အိမ်ရာစီမံကိန်းများဖော်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရာ ယခုအခါ Bun Ches Groups Co., Ltd နှင့် လက်တွဲ၍ ကန်ဒေါ်လာ ၈၈ သန်း သုံးစွဲကာ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတစ်ခုဆောက်လုပ်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ခု လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြကြောင်း ဖနွမ်းပင်အခြေစိုက် အိမ်ခြံမြေသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြသည်။
နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားသို့ MLMUPC ၏ ဝန်ကြီး ချီယာ ဆိုဖာရာတက်ရောက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်မည့်နေရာမှာ ကန်ဒယ်ပြည်နယ်၊ ပွန်ဟီးလျူခရိုင်၊ ဆလန်ဒိုင်ဒေါ့စ်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်သည်။
ယင်းအိမ်ရာကို ဝင်ငွေနည်းပါးသူများ၊ လူလတ်တန်းစားများအတွက် ရည်ရွယ်သည့်နည်းတူ အရပ်ဘက် အစိုးရဝန်ထမ်းများနှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များမှ အမှုထမ်းများအတွက်လည်း ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆိုသည်။
Bun Ches Groups Co., Ltd မှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဘွန်ချက်စ်က ပြောကြားရာ
တွင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အိမ်ရာစီမံကိန်း ဒီဇိုင်းနှင့်
“ဒီအုပ်စုဟာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားမှာ စီမံကိန်းတွေ အများကြီး ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Toul Kork သိုလှောင်ရုံ၊ Mekong View တာဝါနဲ့ အခြားစီမံကိန်းတွေ
ပါဝင်ပါတယ်။ အခုစီမံကိန်းက စတုတ္ထမြောက်ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ပြောကြားသည်။
နေအိမ်ခန်းများ၏ ဈေးနှုန်းမှာ တစ်ခန်းလျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၂၃၅၀၀ နှင့် ၂၄၈၀၀ အကြားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း လက်ငင်းပေးသွင်းရမည်
တန်ဖိုးအနည်းငယ်မြင့်သော်လည်း တစ်လလျှင် ပေးသွင်းရမည့်ငွေမှာ
ဒေါ်လာ ၂၀၀ အောက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
စီမံကိန်းတွင် နေအိမ်ခန်းပေါင်း ၅၃၄၀ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး
စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးခန်းနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာများလည်း
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ဒေါ်လာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြို့ပြစီမံကိန်း
မြန်မြန်ဝယ်၊ မြန်မြန်သုံးနိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ
လကမ္ဘာ၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် သောကြာဂြိုဟ်များပေါ်တွင် မြေ ၁၀ ဧကလျှင် ၁၉၉ ပေါင် (မြန်မာကျပ်ငွေ သုံးသိန်းခွဲကျော်) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်...
ကမ္ဘာကျော်အင်္ဂလိပ်တီးဝိုင်းကြီး The Police ၏ ရှေ့ထွက်အဆိုတော် မန်ဟက်တန် penthouse ခန်းကို ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ဖြင့် ဈေးကွက်တင်...
နယူးယောက်တိုင်းမ်သတင်းစာကြီး၏ အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာ စတီဗင် ဂိမ်းစ် ဟမ့်ပ်တန်နေအိမ်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၃ သန်းနီးပါးဖြင့် ရောင်းချမည်...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြိုတိုင်းရင်းသားများအတွက် နေအိမ်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ပေးမည့် စီမံကိန်းစတင်ဆောင်ရွက်...
၀န်ထမ်းတွေရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးဖို့ Microsoft က ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်း သစ်ပင်အိမ်တွေ တည်ဆောက်ပေး...
သထုံစက်မှုနယ်မြေတွင် နော်ဝေကုမ္ပဏီမှ ဆိုလာစွမ်းအင်စက်ရုံ တည်ဆောက်မည်
လှိုင်မြို့နယ် မာလာမြိုင် (၇)လမ်းတွင်ရှိသော ၅လွှာတိုက်ခန်းငှါးရန်ရှိသည်။
1.70 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
လိူင်မြို့နယ် မာလာမြိုင် (၇)လမ်းတွင်ရှိသော တိုက်ခန်းသည် ၆၂၅ စတုရန်းပေ ကျယ်ဝန်းပြီး ထပ်ခိုးလည်း ပါဝင်သည့် တိုက်ခန်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မီးဖိုဘက်တွင်လည်းကြွေခင်းထားပါသည်။...
ဆက်​သွယ်​ရန်​ ph.09798474751..0930199140..09450029553 သို့ဆက်​သွယ်​​မေးမြန်းနိုင်​ပါသည်​
12.5×50 ပေ . အဲကွန်း - 1 လုံး . ပရိဘောဂ , ပါကေးခင်း 3F ကျောက်တံတားမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် လူနေထူထပ်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိင်ငံတာကာအဆင့်မှီအဆောက်အဦးကြီးများ၊...
$ 178 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
သာဓုကန်စက်မှုဇုန် စက်ရုံ (51000 sqft) မီး 315KVA ငှား 1လ 178သိန်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိသောကြောင့် တည်နေရာအနေအထားအရ ရန်ကုန်မြို့တွင်းဧရိယာများနှင့် အလှမ်းဝေး သော်လည်း...
09-5139209,09-774 8080 90,09-774 9090 80, 09-775909070
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အကျယ်ပေ(18'x54') 1-Master Bed Room 1F RC ခင်း ရေချိုးခန်း/အိမ်သာ/မီးဖိုခန်း
အလွန်တန်သော လမ်းကောင်းသော တိုက်အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းရန်ရှိသည်
330 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ချစ်ကောင်းမှတ်တိုင် ရန်ကြီးအောင်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရှိသော ပေ(20x60) အသင့်နေထိုင်နိုင်သော တစ်ထပ်တိုက်အိမ်နှင့်ခြံရောင်းရန် ရှိသည် ပါမစ်မြေမူရင်း...
09-763150319 , 09-264815734
555 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
တစ်ထပ်တိုက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် သာကေတမြို့နယ် ရန်ပြေ ၁၅လမ်းအနောက်က ၁၅ပေ×ပေ၆၀အိမ်လေးပါ ဂရံ ကတော့ပေ ၄၀ကွက်ကို သုံးဦးအမည်ပေါက်ပါ ဈေးကတော့ သိန်း ၅၅၅ ခေါ်ထားပါတယ်...
20-60 မြေကွက် နှင့် အသင့်အတင့် အိမ် ရောင်းရန်ရှိသည်
600 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
နွယ်သာကီ (7 ) လမ်း အရှေ့ခြမ်း နေအိမ် အရှေ့လှည့် လမ်းသန့် ရပ်ကွက်သန့် ဈေးနီး ကျောင်းနီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆောက်ရန် / ကန်ထရိုက်ဆောက်ရန် သင့်တော်
09 250332556 65 81124270
530 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
ပေ ၂၂ x ၅၀ မြေကွက် လူနေစည်ကားသောရပ်ကွက်သန့် အတွင်း , လမ်းသန့် , အိမ်ရှေ့ကွန်ကရစ်လမ်း။ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး , ခရေပင်ရိပ်မွန်, အ.ထ.က ၂ (အောင်ဆန်းသူရိယ လှသောင်းကျောင်း) အနီး။ ရာသက်ပန်...